Kamera pane Apple Watch? Ehe, zvinogoneka | Ndinobva mac
Kamera pane Apple Watch? Kana zvichibvira
Chimwe chezvinhu izvo vashandisi vakapotsa nekusvika kwekutanga Apple Watch Izvo zvaive zvekuti ivo vaive vasina kamera pachiratidziri chavo kuti vakwanise kuita inozivikanwa FaceTime vhidhiyo mafoni. Nekudaro, kunyangwe paine zviuru zvekuti vanhu vanoda kuti Apple Watch ive nekamera, vanhu vaApple vachiri vasina pfungwa iyoyo mumisoro yavo.
La CMRA kambani ndeimwe yemakambani ekutanga akashinga uye akagadzira chirevo chetambo yeApple Watch iyo inobvumidza mushandisi kuve neyese kamera uye HD vhidhiyo. Tambo yeCMRA ine dhizaini yakapusa Uye inokodzera tambo tambo yeapuro Tarisa zvakakwana.
Izvozvi zvave kugona kuve nekamera uye vhidhiyo kamera pane yako ruoko padhuze neApple Watch yako uye CMRA yakagadzira tambo nyowani mumavara mana nebhatiri remukati iro rinopa masimba maviri makamera ane Sony sensor, imwe kumberi yekufonera vhidhiyo uye imwe kumberi kuti ikwanise kubata yakananga kumberi. Iyo yekumberi kamera ine resolution ye8 MPx uye kumberi 2 MPx.
Kana iri yevhidhiyo, unogona kurekodha inosvika makumi matatu emaminetsi muHD mhando nekuchaja kwakazara kwetambo.
Kune avo vanoisa maoko avo kumusoro kuitira zvakavanzika, isu tinofanirwa kutaura kuti tambo ine chiratidzo che LED kuti iri kushanda kuitira kuti muridzi weiyi tambo arege kunge achirekodha pasina vamwe vanhu vese kuziva nezvazvo.
Mutengo wacho ndewe 249 madhora Asi kambani yakatanga chirongwa chekufanobata mairi umo vanokupa mutero we $ 65. Uye zvakare, netambo yega yega iwe yaunotenga chiteshi chekuchaja inosanganisirwa iyo isingangobhadharise tambo chete asi zvakare kudzoreredza iyo iPhone nekuve neye induction yekuchaja pamusoro. Iyi yekuchaja base inouya sechipo uye inokosha pa $ 60. Iwo okutanga kutumirwa akarongerwa rinotevera gore.
Panyaya yeSpain, isu tichiri kufanirwa kumirira kutengeswa kwepasi rose kutanga. In ino webhusaiti iwe unogona kuziva rumwe ruzivo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Kamera pane Apple Watch? Kana zvichibvira
Iwo maratidziro eiyo nyowani iMac inotyisa: Intel Xeon E3, 64 GB ye RAM, AMD mifananidzo, uye Thunderbolt 3
McAfee anoti panguva ya2016 malware yakawedzera kupfuura mazana manomwe muzana paMacs